Tun Tun's Photo Diary: Merlion and Marina Bay Sand, Sunrise
စင်ကာပူက MRT က မနက် ၅နာရီခွဲ လောက်မှာ Pasir Ris MRT ကနေစပြီးထွက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က Bedok ကနေ စီးမှာဆိုတော့ ရထားက Bedok station ကို ၅နာရီ ၄၅လောက်မှာ ရောက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးရထားနဲ. Esplande MRT ထိစီးခဲ့ပါတယ်။ ညက မိုးရွာထားတော့ Sunrise ရှိမရှိ မသေချာဘူး။ ဒါပေမယ့်လဲ အားလုံး အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးနေတော့ မရောက်ရောက်အောင်သွားခဲ့လိုက်တယ်။ စင်ကာပူမှာ မိုးအုံ.လို.၊ ရာသီဥတု မကောင်းလို. ဓါတ်ပုံမရိုက်ချင်ဘူးဆို၇င်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို. အခွင့်အရေး အရမ်းနည်းတယ်လို. ပြောချင်ပါတယ်။ Esplande MRT ကို ၆နာရီခွဲ မတိုင်ခင်ရောက်ပါတယ်။ နေကတော့ မထွက်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် Merlion ဘက်ကို အမြန်ပြေးသွားခဲ့တယ်။
စင်ကာပူရဲ.နေထွက်ချိန်က ၆နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက်မှပါ။ ၇နာရီလောက်ထိ နေလုံးကိုမြင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက် အစောကြီး ထစရာတော့ မလိုပါဘူး။ ပထမဆုံး MRT နဲ. စီးလာလိုက်တာ နေထွက်ချိန်နဲ. ကွတ်တိ ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် အရင်ရောက်နေတဲ့သူတွေ တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူတို.လဲ Sunrise ဓါတ်ပုံလာရိုက်တဲ့သူတွေပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေ.ခင်းဘက်မှာ ထက်စာရင် ဓါတ်ပုံရိုက်လို. ပိုကောင်းပါတယ်။ နေ.ခင်းဘက်ဆို လူတွေ ပွစိတက်နေတာပဲ။ Merlion က Singapore ရဲ. Landmark ဆိုတော့ လူတိုင်း အငမ်းမရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူရှင်းတဲ့ Sunrise အချိန်ဓါတ်ပုံလာရိုက်တာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
တိမ်တွေ မည်းနေတော့ နေမထွက်တော့ဘူးထင်နေတာ။ ကံကောင်းချင်တော့ နေက တိမ်တွေကြားထဲကနေ ထွက်လာတယ်။ အစက နေမထွက်တော့ဘူးထင်ပြီး အဆောက်အဦးတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေရာက နေထွက်လာတော့ နေထွက်တဲ့ ဘက်ကို ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်ရပြန်တယ်။ Sunrise/Sunset ဓါတ်ပုံရိုက်တာ သိပ်မကျွမ်းကျင်ပေမည့် ရလာတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ မဆိုးဘူးထင်တာပဲ။
နေလုံးကြီး အပေါ်ရောက်သွားတော့ MRT ဘက်ကို ပြန်လာရင်း ဓါတ်ပုံတချို.ရိုက်ခဲ့သေးတယ်။ Weekend ဆိုတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တခြားသူတွေအိပ်နေတုန်းရှိသေးတယ်။ ကိုယ်က ဓါတ်ပုံတောင်ရိုက်ပြီးလို. ပြန်လာပြီ။း)
ဒါကြောင့်မို. စင်ကာပူမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်စရာနေရာ မကျန်တာ့လို. ငြီးငွေ. လာရင်။ လူအများသွား သိပ်မရိုက်ဖြစ်တဲ့ Sunrise အချိန်မျိုး ထပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြည့်ဖို. တိုက်တွန်းပါတယ်။ ရိုက်တဲ့ နေရာချင်းတူပေမယ့် တမူထူးခြားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရနိုင်တယ် လို. ပြောပါရစေ။
at 1/13/2016 09:01:00 PM
ko9January 15, 2016 at 7:22 PM
လှပ့ ဗျာ...:D :)